Yekupedzisira yakasimba tensile simba bvunzo - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Yekupedzisira yakasimba tensile bvunzo imwe inonzi maximal mega tensile bvunzo iyo yaimbo pimha kugona kwekunyima meyiki mitoro yezvigadzirwa.
Uku kuyedzwa kwemuchina uko simba rekudhonza rinoiswa kune chinhu kubva kumativi ese kusvika sampuro yachinja chimiro kana kutyoka. Iyo bvunzo yakajairika uye yakakosha inopa ruzivo rwakasiyana siyana nezve izvo zvinhu zviri kuyedzwa, kusanganisira kukwirisa, goho poindi, kusimba kwesimba, uye simba rekupedzisira rechinhu.
-Pole mutsetse kuturika zvinosungisa
-Preformed mukomana anobata
-ADSS kushungurudzika kwakafa magumo
-Stainless simbi zvisungo
-FTTH Kudonhedza zvisungo
Kutsungirira bvunzo pakundikana tension teki yekuyedza michina pasi pechimakanika uye yekupisa kushungurudzika ine oscillation kushushikana kune akasiyana maitiro maererano nematanho EN 50483-4: 2009, NFC33-020, DL / T 1190-2012 yemagetsi ekuparadzira zvishongedzo, uye IEC 61284 yepamusoro fiber optic tambo, uye zvishongedzo.
Isu tinoshandisa kutevedzera zviyero bvunzo pane zvigadzirwa zvitsva usati watanga, zvakare nezvezvigadzirwa zvezuva nezuva, kuitira kuti uve nechokwadi chekuti vedu mutengi vanogona kugamuchira zvigadzirwa zvinosangana nezvinodiwa zvemhando yepamusoro.